Manni Marii dhalattoota Ityoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatanii, namoota miidiyaalee haawasa irratti haasawa jibbansaa geggeessan seraan gaafachiisuuf sochii jalqabuu ibse
Nafisa biti Qasoo
on 07/04/2019 at 04:42 pm
Asalam maleku warmatuliyi wabarakatu akami nagha jiratani ustaza kenya kani kana nu qophesitani hundu galatoma mashaa Alhaa jzk Rabini isini ira Haa jalatu Rabi bilisuma bilisuma calatu Adunya fi taa Akirati nu qunamasisu Aminiiiiii Aminiiiiii Aminiiiiii
on 07/04/2019 at 06:38 pm
Assalamualeykum worahmatullaahi woobarakaatuMaasha Allah Rabbiin isinirraa haa jaallatu , Rabbiin giidoo isiniif haa, Jzk Rabbiin umurii dheera,jiruu haaragalfii, Milkii duniyaa fi aakiraatiin isin haa milkeessu . Isinis Du’aa’ii naaf godhaa Inshaallah?.
on 07/04/2019 at 07:34 pm
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء الله galtomaa hundumtii kesani kanaa nuu dhagesisuu kesanif
on 07/05/2019 at 08:29 pm
on 07/07/2019 at 01:00 am
Galatooma jkr Umrii dheertu Barakaan keysa jirtu Rabbi Isini ha kennu.
Dubbii himaan mana marii dhalattoota Ityoophiyaa Ameerikaa keessatti argamuu Obbo Amsaaluu Tsaggaayee ejeensii Odeeyfannoo Ityoophiyaatiif akka ibseeti, “Manni Marichaa mirga fi bu’aa lammiilee Ityoophiyaa Ameerikaa fi guutuu addunyaa keessa jiraatanii kabajsiisuu fi falmuuf beekkamtii seeraa kan qabu akka ta’eefi, Kanaan duras wixinee seeraa HR 128 jedhamu Kongirasii Ameerikaatiif dhiheessee akka hojii irra oolu godhe ture. Amma immoo Jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argame kan deeggaruufi jijjiiramni akka itti fufus ni jajjabeesa” jedhe
Itti dabaluun manni marii dhalattoota Ityoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatanii kun, lammiilee Ityoophiyaa biyyoota alaa keessa taa’anii haasawa dharaa biyyatti keessatti jeequmsa kaasu, kan sabaa fi sablammoota walitti buusu karaa miidiyaalee hawaasaatiin facaasan seeraan gaafachiisuuf sochiin jalqabamee jira jedhe .
Yaaliin fonqolcha mootummaa Naannoo Amaaraa fi ajjeechaan qondaaltota naannichaa irratti osoo hin raawwatamin guyyoota muraasa dura, karaa miidiyaalee hawaasaatiin qondaaltonni naannichaa aangoo kan hin lakkisne yoo ta’e akka ajjeeffaman dhaamsi jedhu, lammiilee Ityoophiyaa biyya alaa keessa jiraataniin facaafama ture. Eegaa dhaamsi jibbiinsaa kun Viidiyoo fi karaa adda addaatiin maqaa hoggantoota ajjeeffamanii waamaa dabree booda, ajjeechaan qondaaltoota naannichaa irratti kan raawwatame tahuun beekameera.